Ukongeza iXabiso eloNgezelelweyo kuShicilelo-Intec Printing Solutions Ltd
Yiba liqabane le-Intec
Imigaqo-nkqubo kunye neengxelo
Ukusika kunye nokusika
I-Foiling, i-lamination & holographics
Iiprinta zombala wedijithali
Igumbi lokubonisa elifanelekileyo
Khangela imveliso ngemodeli
Abaqhubi & ukhuphelo
Iilwimi zamazwe ngamazwe zeColorSplash
Ukuhamba komsebenzi kunye nolawulo lombala
isisombululo selebhile ye-LPS215
Bhalisa imveliso entsha
'Uyenza njani' inkxaso yevidiyo
Iziqinisekiso kunye neembuyekezo
I-MSDS – impilo nokhuseleko
Kucetyiswa & neendaba eziqinisekisiweyo
Umncedisi we FTP
Indawo yokuphuma yefektri
Iinkqubo zokusika zedijithali
Uluhlu olubanzi lweemodeli ezihambelana nezicelo kunye nemveliso
Iinkqubo zokufoyila kunye ne-laminating
Yongeza iziphumo zeprimiyamu ngeefoyile zetoner, iilaminates kunye neefilimu zeholographic
Iinkqubo zoshicilelo lwemibala yedijithali
Imodyuli, inkcazo ephezulu yemizobo yomshicileli wobugcisa
I-Intec ibisentliziyweni ye-innovation yaseBritane kunye noyilo loshicilelo lwehlabathi kunye nokugqiba ishishini ukususela ngo-1989 kwaye ikhule yaba ngumboneleli omkhulu wezisombululo ezizodwa zabashicileli bedijithali, iifoiler kunye nezixhobo zokusika.
Ukukhetha i-digital die-cut and kiss-cutting solutions kuluhlu olubanzi lwezicelo ukusuka kwipakethe ukuya kwiilebhile. Ii-Flatbed kunye ne-auto-feed cutting systems, oomatshini bokusika amakhadi oshishino kunye ne-sheet ezinikeleyo yokusikwa kwe-kiss-cut label cutting systems.
I-Foiler / i-laminators
Idesktop kunye nezixhobo ezizimeleyo ezizimeleyo zokufolitha kabini kunye nezixhobo zokuthambisa, eziyilelwe ukunika isisombululo esifikelelekayo kunye nesifunwayo sangaphakathi endlwini sokongeza iifoyile zetsimbi, iilayithi kunye neziphumo zeholographic.
Yongeza ngokulula ukugqitywa kweprimiyamu kunye neziphumo ezimangalisayo kumaphepha ashicilelweyo.
Abashicileli bedijithali abaphambili kwiklasi nabafikelelekayo, bexhasa ukhetho olubanzi lweentlobo zemidiya. Uluhlu lubandakanya, ukhetho lwemibala emi-4 yeemodeli ezimfutshane kunye neziphakathi zokuprintwa kwekhadi, ukupakishwa, iibhanari, iilebhile, iimvulophu, imidiya yokudlulisa kunye nokunye okuninzi.
Jonga uluhlu lwangoku lwemveliso ye-Intec.
Jonga kwaye ukhuphele iincwadana zemveliso.
Jonga iividiyo zemveliso.
Sukuthatha nje ilizwi lethu ngayo - nantsi into ethethwa ngabathengi bethu - cofa kwizifundo zezifundo.
I-Intec ColorFlare yethu isigcinela imali kwaye izise ishishini elitsha elinika umdla kwifemu yethu ekudala yasekwa yokushicilela.
Ushicilelo lukaTony Bowyer
Umsiki wethu we-ColorCut flatbed uncede kakhulu ukuguqula ishishini lethu ngokwandisa imveliso kunye nokudala amathuba amatsha.
Amakhadi okuDla iLifa leMveli
Singakwazi ukuvelisa iprototype enye okanye ibhetshi epheleleyo yeesampulu, ngokukhawuleza kunye nesidingo-ngokuzithemba kumgangatho womsebenzi.
Ngaba ufuna iNkxaso ekude kwi-Intec?
Fumana uncedo ngoko nangoko kwingcaphephe ye-Intec yobuchwephesha - siza kwabelana ngesikrini sakho ngeTeamViewer kwaye sisombulule nayiphi na imiba onokudibana nayo ngesixhobo sakho se-Intec. Fowunela u-Intec kuqala ukuze ibhola iqengqeleke.
Fumana uncedo ngeTeamViewer
Undlunkulu we-Intec UK:
Iziko loShishino lwaseMntla Tampa 16011 N. Nebraska Avenue
I-Intec yinkampani yehlabathi ngokwenene, eneofisi e-UK nase-USA, exhasa inethiwekhi yabathengisi kwihlabathi liphela. Isekwe ngaphezulu kweminyaka engama-30 eyadlulayo, i-Intec ithathwa kakhulu ngenxa yokuthembeka kwayo, ubuchwephesha, imveliso yeengcali ezijolise ngokukodwa kushicilelo kunye neshishini lemizobo. Funda ngakumbi apha. Funda indlela i-Intec 'ewenza ngayo umahluko' ngayo Umsebenzi wokupha.
Iinkcukacha zobhaliso lwenkampani
Yiba nguMlingane we-Intec
Qhagamshelana ne-Intec UK
Qhagamshelana ne-Intec USA
Bhalisa kwiphepha lencwadana ukuba phakathi kwabokuqala ukufumana iindaba.
I-Intec Printing Solutions Ltd
Kutheni ungabhalisi kwincwadana yeendaba ye-Intec ngaphambi kokuba usithumelele i-imeyile- kwaye ufumane ukufikelela…
[ifomu yoqhagamshelwano-7 id = "320" isihloko = "Intengiso yoqhagamshelwano"]
Sisebenzisa ii-cookies ukuqinisekisa ukuba sikunika amava afanelekileyo kwiwebsite yethu. Ukuba uqhubeka usebenzisa le ndawo siya kuthatha ukuba uyavuya ngayo.OkYala zonke iikukiUmthetho wabucala